MUJAAHID MAXAY TAHAY
SomaliNet Forum (Archive): RA'YIGA DADWEYNAHA - Your Opinion: Somalia: Archive (Before Nov. 8, 2000): MUJAAHID MAXAY TAHAY
<!-Post: 122315-!><!-Time: 973371234-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Araday<!-/Name-!> Saturday, November 04, 2000 - 10:53 am
<!-Text-!> Waxaan in mudda ah baaraayay kalmada mujaahid micnaheed?sidoo kale kumaa noqon karo mujaahid?
Ilaa iyo hadda waa weysanahay qof jawaab iga siiya. <!-/Text-!>
<!-/Post: 122315-!> <!-Post: 122321-!><!-Time: 973371815-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>mujaahid yaqaan<!-/Name-!> Saturday, November 04, 2000 - 11:03 am
<!-Text-!> salaan araday:_
mujaahid waa ninka naftiisa oo hebiiyey difaaca wadankiisa iyo dadkiisa waxa kaa mid ahaana mujaahidiintii soomaliya mujaahid lixle,maxamed cali waa nimankii kaa saaray wadanka afwayne waxay oo dhinteen in aay dulmiga kaa qaadaan dadkuuda,mujaahid waa ninka difaaca sharaftiisa(haweenka)iyo caruuta iyo maalikiisa.
illaahay haa oo naxareesto mujaahidiinta maanta inaga hooseeya <!-/Text-!>
<!-/Post: 122321-!> <!-Post: 122333-!><!-Time: 973373713-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>abdikarim hassan<!-/Name-!> Saturday, November 04, 2000 - 11:35 am
<!-Text-!> ma sida soomaalidu isticmaasho mujaahid ayaad
dooneysaa mise sida ilaahay quraankiisa inoogu
sheegay kala cadee marka hore midka aad dooneyso
ka dibna waan isku deyey in aan jawaab ku siiyo
haddii allaha awooda leh ogolaado. <!-/Text-!>
<!-/Post: 122333-!> <!-Post: 122349-!><!-Time: 973377054-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Saturday, November 04, 2000 - 12:30 pm
<!-Text-!> Mujaahid waxay diinteena islaamka ahi u taqaanaa qofka u dagaalama inay Alle kalimadiisu sarayso ama xaqu markastaba ka sareeyo baadilka. Laakiin soomaalidu waxay kelmadan u adeegsatay qabiil qabiil la dagaalamaya waana arin ah meel ugaga dhac Islaamka. Hadal iyo dhamaantiise soomaaliyey macnaha mujaahid haddii aad iska indha tirto saadanbe baad garan marka suurka la afuufo, ee aad soo kacdo adigoo balagta salaqsanaya afkana sare u taagaya oo leh Yaa Rabi Yaa rabi i badbaadi islamarkaa ka caraya qoladaada ama dadka ciddi aad ugui jeclayd Akhri suuratul cabasa dhamaadkeeda ama Saala dhexdeeda.
Sidaas iyo nabad gelyo <!-/Text-!>
<!-/Post: 122349-!> <!-Post: 122371-!><!-Time: 973380498-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Saturday, November 04, 2000 - 01:28 pm
<!-Text-!> Mujaahid waa ragga ka dagaalamaya jeejniya, kashmiir, Indooniisiya, Naayjeeriya, falastiin-
ee ku dhimanayaa allaahu akbar, this man is mujahid. Mujaahid ma ahan lagumana sheegi kara kuwa daafacaya ina Salaad booy they are mooryaan.
dagaaladda Soomaaliya wax ka qaybqaadanaya oo dhan
marna laguma tilmaami karo mujaahidiin.
wa bilaahi tawfiiq. <!-/Text-!>
<!-/Post: 122371-!> <!-Post: 122681-!><!-Time: 973436540-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>ARDAY<!-/Name-!> Sunday, November 05, 2000 - 05:02 am
<!-Text-!> Salaan: Abdirkarim- Hassan
Walaal waxaan doonayaa in la iigu fasiro sida uu ilahay qur'aankiisa inoogu fasiray ?
Sida aayad qur'aan ama xaddiis.
<!-/Post: 122681-!> <!-Post: 122693-!><!-Time: 973438687-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Sunday, November 05, 2000 - 05:38 am
<!-Text-!> Waxaan ku waydiyey wilka yidhi waxaan donayaa inuu mujahid nogu dabakho maxamed cali iyo kuwa aad shegtay. maxamed cali waxaa gacantisa ku dilay coll- daud dawaco jiqil isaga iyo kuwii galada u adegi jiray.
Nakhuda yaal iyo kufraad nebviyo bodeene nacaluhu kuwuu fulay baad daba nashlayseen nagaad u tihiin galadii nalashka dherayd nasab hadaad tihiin galadaad nici lahaydeen.
Inadeer waxaad tahay basaas aan wadani ahayn meekl calankii somaliyeed ee galada laga soo dhiciyay lagu gubo waxaa ka jira cara isaaq carurtina iyo naga hiini waxaad dalkoo dhisan xeryo oga odeen Ethiopia <!-/Text-!>
<!-/Post: 122693-!> <!-End-!>